Fa inona no ao ambadiky ny fanambarana miaramila? | eo ampiomanana indray
eo ampiomanana indray
novembre 26, 2009 at 12:14 Laisser un commentaire
Tsorina aloha fa nantenain-kanirina ny tafika vao nampivandravandra. Eo am-piketrehana ny hanoratana atao hitam-bahoaka ny hafatro na fiangaviako amin’ny tafika aho no nitsahatra indray rehefa nahita tamin’ny gazety fa nisy fivoriana miafina nataon’ny manam-pahefana ambony ao amin’ny miaramila. Mahafantatra tsara aho fa ry zareo no tena manam-pahefana eto amin’ity tanàna ity fa tsy izay milaza ho mpitondra amin’izao fotoana izao. Nihevitra ihany aho fa manana fieritreretana afaka ny mamakafaka ny zavamisy amin’izao fotoana izao ireo ao amin’ny tafika ireo. Nihevitra aho fa tsapan’izy ireo ny fitarazohan’ny raharaha ka mba handray ny andraikiny amin’ny famahana araka izay haingana izao fiziriziriana misy izao. Nitsimbadika tanteraka anefa ny raharaha rehefa nanao ny fanambarany ny Lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika Malagasy ny alarobia 25 novambra 2009. Nanipy ny baolina tamin’ny mpiandraikitra ny fitandroana ny fiambenana ao amin’ny prezidansa sy ny primatiora ry zareo, izany hoe amin’ny Lt-Kln isany Lylison René de Roland sy Charles [Martel?] Randrianasoavina no nanankinana manontolo ny fanendrena izay ho mpiambina avy ao amin’ny tafika ny olom-panjakana Malagasy.
Misy hafetsena lalina dia lalina hanomezana vahana manokana an’i Andry ao anatin’izany rehetra izany, satria manahy ny mpiambina nalaina hiambina nefa tsy nahazo alalana avy amin’ireo olona efa nanana ny lazany tamin’ity taona 2009 ity fandrao voaroaka amin’ny asany ka ny hany fahendrena dia ny mody any an-toby miaraka amin’ny fitaovany. Manana ny fomba fijeriny ny miaramila fa dia mahavariana loatra raha karazandrazan’ny manampy olana hafa indray no ataon-dry zareo fa tsy mitady vahaolana hampanekena ny rehetra tamin’izay tapaka teo amin’ny mpanao politika nifandamina hiara-mitantana ity tetezamita ity. Mety ho eo ny fanahiana fandrao ho tonga amin’ny tena ihany ny sazy noho ny fanonagam-panjakana izay natao, sady ny hita tamin’ny sary rahateo dia tena ireo nandray anajara mivantana sy lohalaharana tamin’ny fanonganam-panjakana mihitsy no tazamaso nanao ny fanambarana. Efa nanao ny safidiny aloha izany ry zalahy ireto nametraka ny « fanendrena » hiambina ny olom-panjakana amin’ny « mazandoha » amin’ny tafika. Rariny tokoa raha tokana hatrany ny fibaikoana ao amin’ny tafika nefa ny fijeriko azy dia diso lalana tanteraka ry zalahy. Nanampy tosika tamin’ny fiziriziriana sy ny tsy fatahorana handrava ny asan’olona an’hetsiny miankina amin’ny AGOA izay Amerikana mba handraana tanteraka ny toe-karena malagasy hiankin-doha tanteraka amin’i La Frantsa, indrisy…!
Satria efa ny hany mahazo manao fanambarana amin’ny alalan’ny tafika malagasy no nanambara fa i Andry no filoha faratampon’ny tafika sy namindra ny fanendrena izay hiambina ny olona ao amin’ny andrim-panjakana rehetra amin’i Charles sy Lylison dia enga anie tsy hisy fanambarana hafa hivoaka tampoka avy amin’ny olona mety ho afaka manao ny fanambarany ihany koa sady manana ny fahefana hanao izany. Enga anie izany hampiravona ny olana rehetra misy amin’izao fotoana izao fa raha tsy izany kosa no hitranga dia tokony hizaka ny vokatr’ireny fanambarana nataony ireny ny tafika malagasy. Koa dia samia mizaka avokoa fa izahay efa am-bolana no mahatanty ny zavamisy ankehitriny matoa mahasahy milaza ny hevitray hatrany ary tsy menatra amin’izany sy amin’ny tantara, ary enga anie ho tsara kokoa noho ny taloha ny fankalazana ny krismasy sy ny taombaovao amin’ity taona ity. Farany: mahay mihitsy ny mpanao tetipanorona amin-dry zalahy ireo matoa nahatafita hafatra nialoha ny hisiana fanambarana fampitandremana ireo mpitantana ny ankolafy mifampiziriziry. Fa izahay kosa mbola mino ilay tarigetra manao hoe : »Ny hery tsy mahaleo ny fanahy! »
jentilisa, 26 novambra 2009 amin’ny 00:02
Tolona endrika hafa indray atao: manomana sy mitaky fifidianana haingana	Voaloboka
Tolona endrika hafa indray atao: manomana sy mitaky fifidianana haingana
VIP Global Voices teny malagasy
teny malagasy - mg
VAovao aVy eto AnToerana